Usuku Lokugcinwa Kwehlabathi - Ngoku lixesha lokuba kuthathe isibambiso
Usuku Lokugcinwa Kwehlabathi - Ndabona ubuntwana kunye nomrhweki, kwaye enye yezinto eziphambili omele uzuze xa uqikelela indlela yokuqhuba itektala yindlela yokuhambisa ngayo. Ezinye iintsuku ndifungayo kubonakala uhla ngaphaya kokuya phambili. Ndivakalelwa kukuba indlela esebenzayo ngokuphindaphindiweyo, ngokunjalo.
Kwihlabathi lezobuchwepheshe, ukuhla, xa usenza impinda okanye ufake idatha yakho, yinto ebalulekileyo. Ngethuba elide lokuba idatha ibaluleke kakhulu kwingqesho yakho, uyasetyenziselwa ukuxhaswa rhoqo. Ngelo xesha, xa kukho naluphi na ukudumala okubangelwa yimpucho yedatha, ufumana kwakhona idatha yakho kwi-backup yakamuva. Ingaba ngumzuzwana.
Esi sizathu kuba kubalulekile ukuqonda zonke izitrato ezikhawuleza ngoMatshi 31, Usuku lokuSindisa iWorld.
Kuzwakala ngokwaneleyo, kodwa ukunyuka kwedatha yakho kunokuba kubiza kwaye kunzima. Nangona iiDVD zedatha zichithwa ngokwenene, ukuqhutshwa kwangaphandle kwezinto ezinzima kunokuba kubiza nantoni yokuba ixabiso elincinci kunokuba liyiminyaka emihlanu ngaphambili. Ngethamsanqa, kubonakala ngathi ezinye iindlela zokugcina izinto ezifukiselwe ngamafu zihamba ngokucacileyo. Kwimeko apho ufuna i-backups yokutyelela, ngoko uya kufuna amandla amaninzi. Ukuxhomekeke kwimilinganiselo yedatha oyithengileyo, kuyafaneleka ukuba iseshoni yakho yokugcina ibingathatha ixesha.
Kwimeko nayiphi na into, ngoku kungakhathaliseki ukuba iNdlu yoLondolozo lweNtshukumo yehlabathi ihamba ngaphi, ndizama ukugcina zonke iifowuni zam, imiyalezo, unyaka wee-tweets kunye nazo zonke ezinye iifom. Ndaya kwiSuku loLondolozo lweMhlaba iminyaka emine ngaphambi kokuthengisa kwi-Twitter. Ukususela kwinqanaba eliya phambili, ndiqinisekisile ukuba izilwanyana zam iindawo ezihlukeneyo kwaye aziphathwanga ngqondweni wokugcina "zonke izityalo-mali ezibophelelwe kwindawo enye." Loo mvo wengqondo uya kubangela ukuba nemiba ihambe kuyo.
Ngokufanayo njengoko uhlola ingqalelo yakho yomsi kwaye utshintshe iibhetri nganye ngexesha lokuSindisa kweSuku, ndenza ukuba ndibekele eceleni ixesha lomcimbi wokulondoloza unyaka ongasigxinwa kwiSuku loCwangciso lweMhlaba. Ndade ndayimisa njengosuku lonke lomcimbi kwi-logbook ye-Outlook. Oku kunenzuzo eyongeziweyo yokukhusela abantu ekubeni bangamkele kwiintlanganiso!
Njengoko kubaluleke kakhulu kumsebenzi wedatha wokulondoloza, ndongeza ukwenza ikhonkco kunye nedatha yam, ngokunjalo. Iigigabytes zam iirekhodi nganye zifana neendlela eziyimfuneko, ngoko iifoto zentsapho, ukurekhodwa kwekhaya, amaxwebhu asemthethweni, imiyalezo kunye ne-80s-music remix remix mp3s ngokungezelelwe ukuhamba ngokupheleleyo kwiDVD yedatha, efini, nakwi-drive yangaphandle.
Inyaniso iyaziwa, ngokuqhelekileyo ndonwabile ukuxhaphaza i-backups ebanzi. Ukuba ngumthengi we-Mac, i-backups iye yinto elula, kwaye ngoku ifu lenze i-backups efunwa kakhulu. Ukusuka ekukhansweni okungenakulungiswa ukuba kungcolise okanye kungakhathaliseki ukuba ndifuna nje idatha encinane kwithuba elidlulileyo, ndiyakwazi ukufumana idatha yam ngokuqinisekileyo. Ngenye yezo zibini zenkqubela ebomini; kuxhomekeka khona apho kum.
Ukuthetha ngeziganeko, uSuku loLondolozo lweLizwe ulongezelela ithuba lokubonga abantu abaphathiswe ukuhlaliswa kweentlekele kumbutho wakho. Ukuqulunqa isicwangciso sokuhlaziya ngokugqithiseleyo kuyingozi okanye kulula. Ukuqhubela phambili nokufezekiswa kombutho wakho kuxhomekeke kwisiphelo esilungileyo kunye nokuphulukana, ngoko ukuqonda le mini kakhulu malunga nendlela yokufudula idatha njengoko ibona abantu abasinceda xa i-data fiasco ibetha.
Ngoko ngo-Matshi i-31 okanye usuku olutshanje lwenyanga nayiphi na inyanga, zama ukuhla phantsi iirekhodi zakho. Ngokufanayo ungathatha iSithembiso seSuku soLondolozo lweMhlaba ngokuphakamisa isandla sakho esifanelekileyo nokuvuselela kwakhona, "Ndiza [nditsho igama lakho] ngokuqinisekileyo ukuba ndihambe phantsi kwamaphepha amkelekileyo kunye nezikhumbuzo ezibalulekileyo ngoMatshi 31st."
I-Technology innovative Solution Ukucela ukuba uhlale ukhumbule ukuba ugawula, fundisa abathandekayo bakho malunga neSuku loLondolozo lweMhlaba ngokubhekiselele kwinto yokuba amaqabane akhululanga amaqabane ngaphandle kokulondoloza.
Indlela yokuqhuba iLinux kwi-Azure, Icandelo I: I-Basics
Indlela yokuphucula iqela leProjekthi Ukuphumelela kusetyenziswa izakhono zoMphathi weProjekthi